ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အောက်စီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သူ့ရဲ့အခြေအနေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ဦးမိုးဒီ – Shwe Yaung Lan
[ January 18, 2022 ] သင် ညစ်ပတ်တဲ့အတွေးရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်ပုံများ	SYL Amazing Photos
[ January 18, 2022 ] “အဖေ ခေါ်ခ ၆၀၀” တဲ့ လား.?	News
HomeCelebrityကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အောက်စီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ သူ့ရဲ့အခြေအနေကို ဗီဒီယိုလေးနဲ့ ပြောပြလာတဲ့ ဦးမိုးဒီ
December 2, 2020 Writer Magic Celebrity 0
ဝါရင့်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးဒီကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်အတော်ကြာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တာပါ
ဦးမိုးဒီဟာကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ဧရာဝတီစင်တာမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဦးမိုးဒီက နေမကောင်းဖြစ်လို့ ဆေးစစ်ရာကနေ Covid 19 ရောဂါ Positive ဖြစ်ကြောင်း သိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ယနေ့မှာတော့ လူရွှင်တော်ကောင်းစံက ဦးမိုးဒီရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကြောင်း တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လူရွှင်တော်ကောင်းစံက “ပရိသတ်များရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာနဲ့အတူ ဧရာဝတီစင်တာမှဗော်လန်တီယာများ၊ဆရာဝန်များရဲ့ကုသအားပေးမှုကြောင့် ဖေဖေ့ရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါပြီခင်ဗျာ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အောက်စီဂျင်ရှူနေရတဲ့ ဦးမိုးဒီက လက်မလေးထောင်ပြီး သူအဆင်ပြေကြောင်း ပြောနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Covid 19 ရောဂါကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဦးမိုးဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ဆယ်လကြာတွဲလာတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်သူကို တရားဝင်ချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲဲ့စံရတီမိုးမြင့်
သင် ညစ်ပတ်တဲ့အတွေးရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်ပုံများ
“အဖေ ခေါ်ခ ၆၀၀” တဲ့ လား.?